eNasha.com - लुटमा धर्मको आड
लुटमा धर्मको आड
घटना केही दिन अघिको हो । मेरी ममी घर-निर्माणको अन्तिम 'फिनिसिङ' हेर्दै हुनुहुन्थ्यो । यत्तिकैमा घर छेउ दर्ुइ महिला देखा परे । तिनले मेरी ममीको हालखबर सोधे र पानी पिउन दिन आग्रह गरे । आमाले पनि तिनको हालखबर सोध्नु भयो । उनीहरुले मनकामना मन्दिर पुगेर आएको र साह्रै थाकेको बताए । धार्मिक प्रवृत्तिकी मेरी ममीलाई ती दुइको व्यवहार र शैलीले छोयो । उहाँ पानी लिन घरभित्र छिर्नु भयो । उनीहरु पनि सरासर भान्सामा ममीसँगै छिरे ।
ती दुइ महिलाले मेरी ममीलाई टीका लगाइदिए र प्रसाद भनी केही खान दिए । त्यो 'प्रसाद' खाएको केही क्षणमै ती 'धार्मिक' व्यक्तिले ममीसँग उहाँले लगाउनु भएको सुनको बाला, सुनकै सिक्री मागे । ममी बेहोशीको हालतमा खुरुखुरु उनीहरुले भनेको मान्दै जान थाल्नु भयो । सुनको बाला र सिक्री लिइसकेपछि तिनले 'माथि'बाट आफूसँग जे जे गरगहना छ, त्यो लिएर आउनू भन्ने आदेश दिए । ममीले पनि उनीहरुले भनेजस्तै गर्नुभयो ।
एक घण्टापछि ममीले मलाई अफिसमा फोन गर्नुभयो । उहाँको आँखामा आँशु र बोलीमा पश्चाताप थियो । लगभग ११ तोला सुन केही क्षणमै आफ्नै कारणले लुटिएकोमा उहाँमा ग्लानी र क्षोभ थियो ।
त्यसलगत्तै म अफिसबाट घर पुगेँ । ती डकैतहरुको खोजी भयो । तर ती फेला परेनन् । धर्मको आडमा, धार्मिक र कमलो मन भएका मेरी ममीजस्ता धेरै जना लुटिएका होलान् । त्यसैले मैले त नचिनेका व्यक्तिहरुलाई घर भित्र्याउनु भनेको लुटिनु हो भन्ने पाठ त पढेँ, तपाइँले पनि यो पाठ सिक्नुस्, काम लाग्न सक्छ ।
प्रमेश श्रेष्ठ, बागडोल, ललितपुर
न्यूरोडको ब्याग लुटेरा
म न्यूरोडमा केही सामान लिन गइरहेको थिएँ । न्यूरोड त्यसै पनि भीडभाड भई नै रहन्छ । त्यो त न्यूरोडको विशेषता नै हो । रमाइलो के भयो भने जिन्दगीमा पहिलो पटक पकेटमारसँग आमुन्नेसामुन्ने र आँखा जुधाजुध भयो ।
जब म पिपलबोटबाट अलि अगाडि जाँदै थिएँ, मैले बोकेको हाते झोला केही भारी भयो । एक्कासि कसरी यो ब्याग भारी भयो ? दिमागमा प्रश्न त आइरहेको त थियो तर हिँडाइमा अलि बढी 'स्पीड' भएकाले पछाडि फर्केर हेर्नुको अर्थ थियो- अरु कसैसँग ड्याम्म ठोक्किनु ! केटी भयो भने त ठीकै छ, सरी भन्यो अनि एकातिर निस्कियो । तर यदि केटा पर्‍यो भने...- आफ्नै गल्तीका कारण लज्जित हुनुपर्ला भन्ने सोचले पछाडि हेर्न सकिरहेकी थिइनँ ।
उपाय मैले के देखेँ भने आफ्नो गतिलाई कम गर्ने । गति कम गरेर मैले पछिल्तिर हेरेँ । लुट्नलाई पल्किएको एउटा जिङ्ग्रिङ्ग कपाल पालेको केटो आफ्नो बर्कतले भ्याएसम्मले मेरो झोला तान्दै रहेछ, काट्नलाई ।
उसँग मेरो आँखा चार भएपछि शुरुमा उसले झोलालाई छाडिदियो । उसको हिम्मत देखेर म चकित परिरहेकै बेला भीडमा त्यो पाकेटमार यसरी बिलायो, जसरी गधाको टाउकोबाट सिङ !
यो घटनापछि मैले के विचार गरेँ भने, लुटिनुको कुनै सीमा छैन, अवसर छैन । जो जहाँ पनि लुटिन सक्छ । त्यसैले तपाइँ पनि होसियार रहनुहोस् है !
ममता घिमिरे, न्युरोड, काठमान्डु
माली आयलमा हेर्दाहेर्दै...
रातको नौ बज्न लागेको थियो । माली आयल स्टोर कालिमाटीका क्यासियर राम श्रेष्ठ त्यो दिनको आइतबारको अन्तिम कारोबारतिर नजर दौडाउँदै थिए । उनले आइतबार दिनभर भएको आम्दानी मज्जाले बिटो बनाएर राखिरहेका थिए ।
यत्तिकैमा एउटा व्यक्ति उनको अफिसमा आए । मोटरसाइकलको हेल्मेट लगाएको त्यो व्यक्तिले पैसा झिक्न भन्यो । नरम बोलीका राम श्रेष्ठले उनलाई सोधे- "किन र भाइ ?" उनको प्रश्न शायद ठूलो गल्ती थियो, लुटेरका लागि । उसले आफूसँग भएको बन्दूक झिक्यो र उनलाई ताक्दै भन्यो- "पैसा हाल, नत्र तेरो ज्यानको खैरियत छैन ।"
एक्कासि आफूमाथि आइपरेको यस्तो समस्याबाट पनि उनी आत्तिएनन् । तर उनले केही सोच्नुअघि नै उनको पैसामा आँखा लगाएको लुटेराले उनमाथि दुइ गोली प्रहार गर्‍यो ।
बन्दूकको आवाज सुनेर वरपर होहल्ला भयो । रामले पनि हल्ला गर्न भ्याए । तर लुटेराले लुट्न भ्याएन । लुटेरा ज्यान जोगाउन कुलेलम ठोक्नु पर्‍यो । मैले राति एघार बजे एभिन्यूज च्यानलमा उनलाई अस्पतालको शैय्याबाट लुटेराको गतिविधिबारे जान्ने अवसर पाएँ ।
अच्युत खनाल, बाँसबारी, काठमान्डु
होशियार!!!! काठमाण्डौंमा लुटेराको बिगबिगि
नेपालमा आएको शान्ति हिजोआज चोर लुटेरा, फटाहरुलाई बरदान साबित भएको छ। कानासुनि मात्रै जोडने हो भने गएको ३ दिनमा चिनजानका मात्रै ३ जनालाई बिभिन्न तरिकाबाट लुटिएको धटना सुन्नमा आएको छ। साधारण धक्का दिएर पर्स चोर्नेदेखि दिन दहाडै घरभित्र बिरामीको बहानामा छिरी हिप्नटाईज गरी घरमालिककै हातबाट घर खाली गर्ने गिरोहहरु सक्रिय भएको विभिन्न घटना विवरणले पुष्टी गर्छ।
यदि तपाईँका चिने जानेका मानिसलाई पनि यस्तै धटनाहरु भएको छ भने ठाँउ र समयसम्म तोकी हामीलाई लेखी पठाउनुस् । यसले कम्तिमा हामीलाई होसियार हुन सहयोग गर्छ र शान्ति सुरक्षाका निकायलाई सहयोग गर्छ ।
Attention all citizens !
Number of incidents of people being looted in streets and their homes is growing by the day. Many differnet ways are being used to trap the people. You can use the 'Post you comments' form below to share us any kind of similar incidents that you know about. By spreading the messages across, let us aware everyone.